Labada Cirif EE aduunkaEdit
Habeenka iyo maalintaEdit
Markii laga hadlaayo habeenka iyo maalinta Qoraxda waxaa dhahnaa: ”Qorraxdu waa dhacday ama waa soo baxday”. Inkastoo aynu had iyo jeer aan sidaa ku tilmaamno, Hadana Qoraxdu ma aha wax dhaca mana soo baxda, ee dhulkaa isku udub-wareegta. Dhulka inuu hal mar si buuxda isugu udub-wareegana waxay ku qaadata 24 saac. Inta dhulku isku wareegayo, Qorraxdu inftiinkeeday ku haysaa, oo sidaas bey habeen iyo maalin ku kala noqoto.
Wxaa kuu cadeeynaya inaysan qoraxda dhicin marka aad moodo in aay kaa dhacday hadii aad joogto Somalia qorraxda waa u muuqataa dadka galbeedka kaa sii xiga siiba sida America dadka joogo subax ayeeyba u tahay oo marka ay ayaga ka miriqdo adigana kuu soo muuqanee.
Ilaahay baa wax walba abuurayEdit
Ilaahay wuxuu haystaa awood uu ku fuliyo ballantuu qaaday. Yehowah keliya buu ku magacaabaa kan “Qaadirka” ah waayo quwad aan xad lahayn buu leeyahay. Taas awgeed isaga dhib u ma aha inuu run ka dhigo ballantiisa uu dunida wanaajin doono, ah sheegay “wax waluba waa u suurtoobaan Ilaah.”
Dhulka Ma La Baabbiʼin Doonaa?
Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aduunka&oldid=221728"
Last edited on 27 Oktoobar 2021, at 06:33
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Oktoobar 2021, marka ee eheed 06:33.